www.xamarcade.com » Xildhibaanadii Mooshinka keenay oo ka soo horjeestay go’aankii Guddiga joogtada ah
Xildhibaanadii Mooshinka keenay oo ka soo horjeestay go’aankii Guddiga joogtada ah
Xildhibaanada Baarlamaanka ee mooshinka ka keenay Guddoomiye Jawaari ayaa ka soo horjeestay go’aankii guddiga joogtada ah ee Baarlamanka ku laalay mooshinkooda.
Xildhibaanadan ayaa sharci darro ku tilmaamay go’aankii Guddiga Joogtada ku laaleen Mooshinka, iyagoo xusay in laga been abuurtay Xildhibaano la sheegay inay ka laabteen Mooshinka.
Xildhibaan Max’uud Macalin Yaxye oo ka mid ahaa Xildhibaanadii shirka jaraa’id qabtay ayaa sheegay in loo baahan yahay in lagu dhaqmo sharciga iyo dastuurka u yaalla dalka, isagoo waxyaabihii ka soo baxay kulankii Guddiga joogtada ku tilmaamay kuwo aan xeerka iyo sharciga waafaqsaneyn.
Sidoo kale, Xildhibaan Cabdi Cali ayaa isna sheegay in Guddoomiye Jawaari aanu Guddoomiye u aheyn golaha shacabka, inta mooshinkan uu taagan yahay, wuxuuna guddiga joogtada ah ku eedeeyey iney hareer mareen sharciga.
Guddiga joogtada ah ee Baarlamanka Somalia ayaa galabta laalay mooshinkan ka dib markii sida ay sheegeen ay ka laabteen 16 ka mid ah 107 xildhibaan oo saxiixay markii hore, taasoo keentay iney noqdaan 91, halkii laga rabay 92 xildhibaan sida sharcigu qabo.
Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ayaa lugaha la galay qalalaase siyaasadeed oo saameyn ku yeelan doona habsami u socodka howlaha iyo kulamada Golaha.